November 2017 – Allpuntlander.com
Duqayn diyaaradeed oo ka dhacday Shabelaha Hoose
November 29, 2017 admin1
Wararka ka imanaya deegaan ka tirsan gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in maanta ay duqeyn ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn deegaan hoostaga gobolka Sh/hoose. Gantaalo ayaa lagu garaacay saldhig ay ururka Al-Shabaab ku leeyihiin deegaan aan ka fogeyn Beledul-Amiin sida laga soo xigtey dad ku sugan deegaano ku dhowdhow halka ay duqeyntan ka dhacday. Duqeyntan oo laga maqlay deegaano ka tirsan gobolada Shabelaha Hoose iyo Shabelaha Dhexe ayaan la ogeyn qasaaraha ka dhashay. Duqeyntan ayaa sidoo kale waxaa xaqiijiyay saraakil ka tirsan ciidamada dowlada balse illaa iyo hadda wax…
faah faahin socdaalki Wasiirka Amniga Puntland iyo Ciidamo uu hogaaminayo uu ku gaaray degmada Baran iyo cabsi laga qabo dagaal
November 12, 2017 admin1
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baran ee xarunta gobalka Sanaag ayaa sheegaya in uu halkaas hadda gaaray Wasiirka Amniga ee dawladda Puntland Cabdullaahi Axmed Dowlad oo hogaaminayo ciidamo fara badan. Ciidamadan iyo dhaqdhaqaaq xoog leh ayaa laga dareemayaa magaalada Baran, waxayna wararku sheegayaan in meel u jirta 30KM ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland. Degmada HAdaaftihimo ayaa ah meesha ay Somaliland doonayso in ay ka qabato doorashada berri ay u madalsan yihiin, balse ilaa hadda cabsi ayaa ka jirta. Wafdi kale oo ka socda dawladda Puntland ayaa xalay gaaray…
DEG DEG+SAWIRRO: Wasiirka Amniga Puntland oo kaga dhawaaqay magaalada Baran, in aan Doorasho S/Land ka qabsoomi doonin….
Wasiirka Amniga ee dawladda Puntland Cabdullaahi Axmed Dowlad iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada Baran ee gobalka Sanaag, isagoo halkaas kula kulmay waxgaradka, Odayaasha, qeybaha bulshada iyo Saraakiisha ciidamada. Wasiirka Amniga ayaa sheegay in ay dawladda Puntland qaadanayso doorkeeda sugida Amniga, wuxuuna sheegay in Baran iyo deegaanada kale ee Puntland-ba aysan ka dhici doonin wax doorasho Somaliland ah. Wasiirku wuxuu cadeeyey in aysan jirin Saan-Saan Doorasho oo kajirta Baran oo ay wafdigooda joogaan, wuxuuna sheegay in ay Puntland ka shaqeyso Deris wanaag, Nabad iyo Soomaalinimo ayna taas xooga saarayso,…
November 12, 2017 November 12, 2017 admin1
Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in uu dhacay iska horimaad hubeysan oo dhexmaray ciidamada Somaliland iyo Maleeshiyo ka soo horjeeda in doorashadaas laga hirgaliyo Nugaasha gobalka Sool deegaanada loo yaqaano. Wararka ayaa sheegaya in ay ciidamadan hubeysan ku guuleysteen in ay dib u celiyaan Kolonyo gaadiid dagaal ah oo galbinaysay Sanaadiiqda Doorashada oo la doonayey in la geeyo deegaano kamid ah gobalka Sool. Warar madax banaan ayaa u sheegay allpuntlander in ay maleeshiyadan ka soo jeedaan degmada Taleex ee gobalka, isla markaasna ay si cad u diideen…